लकडाउन हटे पनि के–के गर्न पाइँदैन? – Naya Kura Daily
July 22, 2020 250
काठमाडौं। गएको चैत ११ गतेदेखि लागु भएको देश व्यापी लकडाउन साउन ६ (मंगलबार) राती १२ बजेबाट हट्ने भएको छ। लकडाउन हटे पनि केही प्रतिबन्धहरु भने कायम रहेका छन्। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन शुरु गरेको थियो।
अझै पनि कोरोना महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। तर, पछिल्ला दिनहरुमा संक्रमितको संख्या भने घट्दै गएको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै लकडाउन हटे पनि केही प्रतिबन्धहरु भने जारी रहेको बताए।
उनका अनुसार शैक्षिक संस्था, सभा गोष्ठी, प्रदर्शन भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्स बारलगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, व्यूटी पार्लर, जिमखाना, हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेल, धार्मिक स्थलहरु, पुस्तकालय, संग्राहलयहरु र चिडिया खानामाथिको प्रतिबन्ध कायम छ। अर्को निर्णय नभएसम्म प्रतिबन्ध हट्ने छैनन्।
यस्तै सरकारले छोटो दुरीको यातायातमाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा हटाए पनि लामोदरीको सार्वजनिक यातायात भने भदौ १ गतेबाट शुरु हुने बताएको छ। यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा लागु गरिएको सवारी साधानमाथिको जोरविजोर प्रणाली पनि हटाइएको छ।
होटल तथा रेस्टूरेण्ट भने आगामी साउन १५ गतेबाट सुचारु गर्न पाइने छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भने भदौ १ गतेसम्म बन्द नै रहने छ। सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पनि भदौ १ गतेबाट सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै कोरोनाको जोखिम रहेको स्थानीय तह तथा जिल्लामा भने स्थानीयस्तरमै लकडाउन गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ।
Prevदुनियाकै यो अनौठो जीव, जो लामो समय नहल्लिई ७ बर्षसम्म केही नखाई बाँच्छ
Nextनेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या ४१ पुगेको छ । महोत्तरी गाउँपालिका–३ मोरइका ६० वर्षीय एक पुरुषको पनि मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४१ पुगेको हो ।
बाबाको निधन भएको। आमा छोराको उपचार गर्न नसकेर अस्पताल बाटै हराएको। २ बर्षका बाबुलाई उच्च ज्वरो आई प्यूठान विजुवार जिल्ला अस्पताल अन्तरंग विभागको बेड नम्बर २ मा अचेत।